बिरामीसँग बोल्दाबोल्दै ब्रेन ट्युमरको अप्रेशन
के तपाइँ ठिक हुनुहुन्छ ? कस्तो महशुस गरिरहनुभएको छ ? हातखुट्टा चलाउन सकिरहनुभएको छ ? सामान्यतया अप्रेशनपछि बिरामीलाई यस्तै प्रश्न सोध्छन् चिकित्सक ।
तर, जब ओटी टेबुल बोल्दाबोल्दै अप्रेशन गरिन्छ भने यो अचम्मकै विषय बन्छ । यस्तै, अचम्मित पार्ने अप्रेशन भारतकाे भगवान महावीर क्यान्सर हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका न्युरो सर्जन डा. नितिन द्रिवेदी र उनको टिमले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन् ।
अप्रेशन गर्ने समयउमा बिरामी होसमा मात्रै थिएनन् कि, उनले हातखुट्टा चलाउँदै कुराकानी पनि गरिहेका थिए । चिकित्सकले कुरा गर्दागर्दै उनको ब्रेन ट्यमरको अप्रेशन गरे ।
डा. द्रिवेदीले भनेका छन्, ‘सीएसआइएफका एक जवानको यस्तो अप्रेशन गरिएको हो । जवानको हातमा कमजोरी महशुस भएपछि गरिएको परीक्षणमा ब्रेन ट्युमर भएको पत्ता लाग्यो ।’
यो ट्युमर दिमागको महत्वपूर्ण क्षेत्रमा थियो । जसले हात र अनुहारको हाउभाउलाई नियन्त्रण गर्ने डा. द्रिवेदीले बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा ट्युमर सामान्य अप्रेशनबाट निकालिएको भए हात र अनुहारमा प्यारालाइज्ड हुने सम्भावना पनि हुने उनको भनाइ छ ।
ट्युमरका कारण जवानले आफ्नो हात चलाउन सकिरहेका थिएनन् । आर्थिक अभावका कारण उपचार गराउन पनि सकेका थिएनन् । दुई महिनाअघि बीएमसीएचआरसीमा चिकित्सकलाई जवानले आफ्नो रिपोर्ट देखाएका थिए । त्यहाँ बिरामीलाई होसमै राखेर अप्रेशन गर्ने योजना बनाइयो ।
डा. द्रिवेदीका अनुसार बिरामीलाई होसमै राखेर अप्रेशन गर्दा अप्रेशनका दौरान बिरामीको शरीरमा देखिने प्रतिक्रिया सहजै नियाल्न सकिन्छ । कमजोरी देखिएको अवस्थामा तुरुन्तै सम्हाल्न सकिने उनले बताए ।
यस अप्रेशनमा बिरामीलाई प्यारालाइसिसबाट बचाउन उपाय अपनाइएको थियो । अप्रेशनपछि अहिले तीन जवान पूर्ण रुपमा स्वस्थ रहेको बताइएको छ । होसमै गरिएको यो अप्रेशनले बिरामी अपांग हुनबाट बच्ने सम्भावना पनि अधिक रहने चिकित्सक द्रिवेदीले बताए ।
अमेरिकाको यो शहरमा छैन मोबाइल, वाईफाई र रेडियो ...
चराको आवाज निकालेर एकअर्कासँग संवाद गर्छन् यहाँका ...
हुआवेले ल्यायो आफ्नै हार्मोनी ओएस, ओभन र स्मार्ट टीभीसँग पनि अन्तर्क्रिया सम्भव
प्रचण्डलाई व्यंग्य गर्दै ओलीले भने– ‘तिल्के गोरुको सिंग फुक्लिसके, धाकधक्कु नलगाए हुन्छ’